Multimedia – Bogga 2 – Windows – Vessoft
Ciyaaryahanka ka Apple inuu u ciyaaro files audio iyo video. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u aragto video qulqulaya, iyo astaysto oo tayo leh loo maqli karo ee daayey.
MediaMonkey – maamule maktabad warbaahin fara badan leh ciyaartoy ku dhex dhisan iyo qaabab fara badan oo ay ku abaabulaan muusikada iyo feylasha fiidiyowga.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay inuu wax ka beddelo, abuuro, la qabsado oo la isku duwo subtitles laga soo bilaabo video. Software wuxuu taageersan yahay noocyo badan oo subtitles ah oo luqado kala duwan ah.
qalab The functional si loogu badalo faylasha audio iyo video qaabab loo jecel yahay, si ay. software wuu awoodaa inuu badalo files galay qaabab gaar ah ee qalabka kala duwan.
HyperCam – qalab shaqeynaya oo lagu duubo falalka shaashada. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad tafatirto feylasha la duubo oo aad dhaqso ugu abuurto bandhigyada fiidiyowga.
Fraps – barnaamij softiweer ah oo ka soo qaado shaashadda oo uu tirinayo FPS. Sidoo kale, softiweerka waxaa si weyn u adeegsada cayaartoyda xirfadleyda ah.
Bandicam – softiweer si aad fiidiyowga uga soo qaadato shaashadda kombiyuutarkaaga. Sidoo kale, waxay taageertaa duubista qaybo ka mid ah shaashadda waxayna abuurtaa shaashadda.
Qalab Popular baahinta il warbaahinta in ay internet-ka ku. Software wuxuu taageeraa goobaha warbaahinta si loo kordhiyo tayada video ah.
Camtasia Studio – softiweer lagu duubo dhacdooyinka ka dhaca shaashada kumbuyuutarkaaga. Sidoo kale, softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu ku daro saameynta kala duwan iyo dhawaaqyada fiidiyowyada.
The Converter video MFT badasha files warbaahinta galay qaabab kala duwan. software wuxuu taageeraa audio iyo video qaabab loo jecel yahay, iyo sidoo kale inta badan qaabab image ah.
Dr.Fone toolkit ee macruufka – softiweer waxaa loogu talagalay in lagu kabo ama loo soo celiyo xogta, hagaajinta khaladaadka nidaamka iyo in laga tirtiro xogta shaqsiga ah iPhone, iPad ama iPod.
GoldWave – tifaftire awood u leh faylalka maqalka ee qaabab kala duwan. Softiweerku wuxuu ka kooban yahay tiro badan oo qalab ah si loogu habeeyo raadadka dhawaaqa iyo dib u soo noqoshada wax soo saar ee faylalka.
Ezvid – aalad awood badan si shaashadda looga soo qaado fiidiyowga. Softiweerku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad duubto fiidiyowga ama maqalka, sameysid shaashadda shaashadda, tafatirka oo aad ku darto saameyno kala duwan.
software waxaa loogu talagalay si loogu badalo videos, oo kala soo bixi 4K ama HD videos, abuuro duubey la music asalka iyo edit faylasha video.
Tani waa software wanaagsan oo loogu talagalay dadka maqaayadaha kuwaas oo kuu ogolaanaya inaad qabanqaabiso maktabyada warbaahinta oo aad baddesho qoraallada faylasha codka.
iSkysoft Toolbox – waa barnaamij caalami ah oo loogu talagalay utility software si loo maareeyo waxyaabaha, loo wareejiyo faylasha, iyo gurmad loogu talagalay aaladaha Android ama macruufka.
AnyTrans for Android – maareeye faylka si loo xakameeyo waxyaabaha ka kooban qalabkaaga Android isla markaana si dhakhso leh loogu wareejiyo feylasha u dhexeeya aaladda iyo PC.